शरणार्थी र आप्रवासी लागि सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा | USAHello | USAHello
<span lang ="ar">शरणार्थी र आप्रवासी लागि सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा</span>
साइटहरु, जारी राख्न, सामाजिक सञ्जाल साइटहरू
सुरक्षा र शरणार्थी र आप्रवासी लागि सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा
कसरी सामाजिक मिडिया मा सुरक्षित रहन? सामाजिक मिडिया लागि सुरक्षा सुझाव
नयाँ मान्छे सञ्चार तपाईं एक आप्रवासी आफैलाई झनै गर्दा राम्रो कुरा हो. तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक्लो महसुस हुन सक्छ, फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्तै सामाजिक सञ्जाल साइटहरू तपाईं तपाईँको देशको नयाँ संघ संग महसुस गर्न सक्छन्. तर यो पनि खतरनाक हुन सक्छ. तथापि, तपाईं जोखिम बुझ्न भने, तपाईं आफैलाई सामाजिक मिडियामा रक्षा गर्न सक्छन्. यहाँ सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा मा मदत जानकारी छ.
सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा सिक्न
सामाजिक संचार को माध्यम मा व्यक्ति सम्बन्धित गर्दा, तपाईंले वास्तविक जीवनमा आफ्नो सुरक्षा राख्न भनेर नै सावधानी प्रयोग गर्नुपर्छ. यहाँ सामाजिक संचार को माध्यम को सुरक्षा मा तपाईंलाई मदत गर्न केही सुझाव छन्.
वा व्यक्तिगत तस्वीर अनलाइन जस्तै आफ्नो मालिक रूपमा सहभागी छैन जो कोहीले, शर्त गर्न विवरण चाहनुहुन्छ. तपाईं मात्र आफ्नो घनिष्ठ मित्र र परिवारका साथ संलग्न छन् कि लाग्छ सक्छ, तर एक पल्ट त्यहाँ इन्टरनेटमा कुरा हो, अधिक व्यापक साझेदारी गर्न सकिँदैन. साथै, तपाईंले इन्टरनेट जडान भएका छन्, तपाईं यसलाई हटाउनेछ अरूलाई यो प्रतिहरू छ किनभने प्राप्त गर्न सक्दैन. धेरै व्यक्ति बहिष्कार वा किनभने इन्टरनेटमा आफ्नो प्रोफाइल को काम प्राप्त गर्न इन्कार गरेका थिए.
तपाईंको जानकारीको सुरक्षा
तपाईं कहिल्यै यस्तो महसुल पहिचान वा बैंक संख्या, पासवर्ड, वा तपाईँको ठेगाना शब्द र संख्या रूपमा, व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ. सामाजिक सञ्जाल तपाईंले आफ्नो जानकारी सुरक्षित बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ गोपनीयता सेटिङ्हरू धेरै समावेश. मा निम्न सरल पुस्तिका कसरी सबै विभिन्न सामाजिक मिडिया गोपनीयता सेटिङहरू व्यवस्थापन गर्न बारेमा.
इन्टरनेट सुरक्षा विशेषज्ञहरु सधैं हाम्रो सबै खाता शब्दहरूको लागि बलियो र फरक पासवर्ड छ सल्लाह गर्दै. Ansahonna द्विपक्षीय प्रमाणीकरण प्रयोग गरेर (थप चरणमा लग इन) वा पासवर्ड प्रबन्धक. तपाईं यहाँ पासवर्ड प्रबन्धकहरू पहिचान गर्न सक्छन्.
पनि गैर-सम्पर्क तपाईंको सुरक्षा विचार
तिनीहरूले आफ्नो गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी प्रकाशित गर्दा वास्तविक संसारमा आफ्नो सुरक्षा विचार. तपाईं सबैलाई सूचित गर्न टाढा छन् कि आफ्नो ठेगाना अनलाइन प्राप्त गर्न र त्यसपछि छुट्टी फोटो प्रकाशित आवश्यक छैन. छुट्टी मा आफ्नो परिवार गर्दा फेसबुकमा प्रकाशित भने, मान्छे आफ्नो घर खाली छ भनेर थाहा हुनेछ.
साथै, कहिलेकाहीँ तपाईं आफ्नो स्थान प्रकाशित सक्छ वा “पहुँच” स्थानहरू. तपाईं यो वा हुँदैन कि सोच्न.
धेरै सावधान रहनुहोस् म कसैलाई भेट यदि म उहाँलाई अनलाइन भेट
मानिसहरू आफू पहिचान गर्न लागि सामाजिक मिडिया सजिलो बनाउन. अनलाइन, तिनीहरूले अरू कसैले बहाना गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं इन्टरनेटबाट कसैले कल भने, के तपाईं तिनीहरूलाई थाहा नभएसम्म एक्लै कि व्यक्ति भेट्न वा घर जान वा तपाईंको घर कल गर्न व्यवस्था छैन. सधैं एक सार्वजनिक ठाउँमा अपरिचित भेटे र तपाईं वरिपरि अन्य त्यहाँ हुँदा.
सबै र सबैका विश्वास छैन
हामी मानिसहरूलाई कसरी धोका लागि सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न बारेमा हरेक दिन थप जान्न. सामाजिक मिडियामा जानकारी एक धेरै गलत छ. कहिलेकाहीं मानिसहरूले एक सामाजिक सञ्जाल वास्तविक मान्छे छैन, र अक्सर कुराहरू सबै छैन साँचो हो. यी व्यक्ति वा गलत नाम हुन सक्छ “बुट” (रोबोट नक्कली). हुन सक्छ सरकार आधिकारिक वा व्यवसाय आधिकारिक देखि हुन नक्कली समाचार रिपोर्ट वा मानिरहेको सन्देशहरू आधिकारिक उपस्थिति.
पढ्न सबै विश्वास छैन. तपाईं केहि पढ्न भने, अन्य स्रोतबाट जाँच.
यदि तपाईं भन्छन् इन्टरनेट मार्फत यो सरकार वा कम्पनी हो एउटा सन्देश प्राप्त, व्यक्तिगत जानकारी प्रतिक्रिया छैन.
पैसा वा पासवर्ड नपठाउनुहोस्
तिनीहरूले तिनीहरूले भन्न रूपमा छन् भनेर 100% पक्का हुँदा कुनै पैसा पठाउन छैन. को अनौठो बैंक खाता पैसा सिधै पठाउने, यस्तो जस्तै Microsoft रूपमा अमेरिकी आईआरएस र वास्तविक व्यापार, रूपमा सरकार कार्यालय, बताउन छैन. केहि लागि तपाईंको वचन नसोध्नुहोस्. अनलाइन कसैलाई आफ्नो पासवर्ड नपठाउनुहोस्.
शत्रुतापूर्ण वा गैर Allatifin मान्छे आफूलाई सुरक्षित
यो शरणार्थी र शत्रुतापूर्ण प्रवासिहरु वा क्रूर मान्छे लक्षित सक्छ. मित्रता अनुरोध तपाईंलाई थाहा छैन मान्छे देखि स्वीकार्य छैन. तुरुन्तै ब्लक कुनै पनि तपाईंको खाता कुनै पनि खतरनाक कुरा प्रकाशित गर्ने व्यक्ति. प्रतिक्रिया छैन. कुरा लेख्न छैन शब्द वा शत्रुतापूर्ण तपाईं अधिक लक्ष्य बनाउन सक्छ. गरिएको प्रकाशित प्रहरी र साइट र सामाजिक मिडिया, व्यक्तिगत धम्की रिपोर्ट.
बाट ठगी र ह्याकरहरूलाई आफैलाई सुरक्षित
किनभने, तिनीहरू एक मित्र आउन पनि यदि तपाईंले पठाउनुभएको लिंक क्लिक नगर्नुहोस् (तपाईं एक खतरनाक लिंक थाहा छैन, वा breached हुन सक्छ). बस मेटाउन. यसलाई यसरी तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण केहि छैन. सायद त्यो आवश्यक थियो कि लिंक आफ्नो आफ्नो जानकारी र आफ्नो पैसा र आफ्नो पहिचान चोरी मा आफ्नो कम्प्युटर मान्छे बिगार्न वा अनुमति दिन्छ कि भाइरस समावेश. र कुनै पनि प्रस्ताव साँचो त अकल्पनीय हुन पनि राम्रो देखिन्छ कि सम्झना! यदि तपाईं के तपाईं नचिन्ने कोही पैसा को एक धेरै हुनेछ कि बताउँदै एउटा सन्देश प्राप्त, यसलाई मेटाउन!
आदी हुन छैन!
तिनीहरूलाई ख्याल गर्ने मान्छे संग सम्पर्कमा रहन सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर Tngers छन् कि वास्तविक संसारमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू लागि खोज घण्टा खर्च छैन. सामाजिक सञ्जाल आफ्नो कम्पनीहरु र तपाईं आदी राख्न आफ्नो आवेदन कुराकानी गर्न डिजाइन. त्यसैले पैसा कमाउन.
आफ्नो छोराछोरीको सुरक्षा राख्न
यदि तपाईंलाई सामाजिक संचार वा समझ को माध्यम प्रयोग गर्छन्, तपाईं आफ्नो बच्चाहरु सुरक्षित राख्न बारेमा पर्याप्त थाहा गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं सामाजिक मिडिया आफैलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, इन्टरनेटमा तिनीहरूलाई बारेमा जानकारी राख्दै द्वारा छोराछोरीलाई सुरक्षित. तपाईं सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्छन् भने, तिनीहरूले प्रयोग सामाजिक सञ्जाल बारेमा छोराछोरीलाई सोध्न. तिनीहरूले बदमासी, यौन शिकारीहरु र खराब विज्ञापन सामग्री उजागर गर्न सकिन्छ. यहाँ केही अनलाइन छोराछोरीलाई सुरक्षा राम्रो जानकारी. यो बच्चाहरु सुरक्षित राख्न सुझाव समावेश र विभिन्न सामाजिक मिडिया सजग हुन सूची.
धेरै प्राविधिक विशेषज्ञहरु मात्र स्मार्ट फोन वा तपाईं को सामने एक कम्प्युटर प्रयोग जवान छोराछोरीलाई persuading सिफारिस गर्छौँ. तपाईं आफ्नो बच्चा सन्दर्भमा निर्णय हुनेछ, तर सबै भन्दा विशेषज्ञहरु बच्चाहरु रात समयमा आफ्नो कोठा मा स्मार्ट फोन वा कम्प्युटर प्रयोग गर्न अनुमति नगर्न सिफारिस गर्छौँ.
किशोरों लागि सञ्चार को सुरक्षा र सामाजिक हालतमा
इन्टरनेटबाट उत्पीडन गर्न एक्सपोजर किशोरकिशोरीहरूको लागि एक प्रमुख चासो छ. यो तथाकथित ई-धम्की छ. जब किशोरीहरूको अनलाइन अन्य किशोरीहरूको Mottagsidin. आफ्नो बच्चाहरु परेशान भने, प्रश्न भइरहेको छैन तंग. यो वेबसाइट इलेक्ट्रोनिक उत्पीडन समावेश किशोरकिशोरीहरूको लागि विस्तृत सुझावहरू मोबाइल फोन को सुरक्षा को बारेमा जानकारी पानाहरू सहित र यौन सामग्री र अन्य विषयहरू हेर्न.
यो सामाजिक संचार को माध्यम किन भनिन्छ?
सामाजिक यस्तो अनुकूल गतिविधिहरु र अन्तरक्रिया अन्यसँग रूपमा समाज वा समूहमा सम्बन्धित, केहि मतलब. मिडिया बीचमा शब्द ढाँचा, च्यानल वा जडान विधि छ. हामी यस्तो टेलिभिजन, रेडियो वा इन्टरनेटमा रूपमा आम संचार, अर्थ मिडिया प्रयोग.
सामाजिक संचार को माध्यम के हुन्?
सामाजिक सञ्जाल नेटवर्क वा अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न तरिकाहरू छन्. सामाजिक सञ्जाल र फेसबुक सहित, twitter,Snape gat र इन्स्टाग्राम – कुनै पनि
तपाईंलाई थाहा मान्छे संग कुराकानी वा थाहा छैन जो एक अनुप्रयोग वा वेबसाइटमा. LinkedIn तर जब र पेशों, सामाजिक सञ्जाल जस्तै काम गर्छ. च्याट कोठा र साइटहरु(मिलाप)सामाजिक मिडिया अन्य प्रकारका छन्. पनि YouTube मा जो कोहीले त्यहाँ भिडियोहरू र टिप्पणीहरू प्रकाशित किनभने, सामाजिक संचार को एक माध्यम हो.
सामाजिक संचार को माध्यम किन खतरनाक हो?
कहिलेकाहीं मानिसहरूले तपाईं धोखा सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्न खोज्नु किनभने सामाजिक मिडिया खतरनाक हुन सक्छ. के तपाईं जानकारी प्राप्त गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंलाई थाहा मान्छे संग आफ्नो व्यवहार र तपाईं वास्तविक जीवनमा थाहा कसरी सोचिरहेका मा जोखिम बुझ्न एउटा तरिका. तपाईं चिन्ने र भरोसा ती खुला रूपमा संवाद – आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई थाहा छैन वा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तिनीहरूलाई सबै कुरा बताउन To.la गर्न सँगै आएका छन् मान्छे संग थप होसियार Almqrbin.kn. तिनीहरूलाई आफ्नो पैसा वा आफ्नो घर प्रमुख दिन छैन. को सामाजिक संचार पनि छ हालतमा को सुरक्षा गर्न यो दृष्टिकोण प्रयोग.